Ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa AMISOM oo maanta hawl-gallo ka bilaabay Muqdisho; sheegtayna qab-qabasho xubno Al-shabaab ah. – Radio Daljir
Ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa AMISOM oo maanta hawl-gallo ka bilaabay Muqdisho; sheegtayna qab-qabasho xubno Al-shabaab ah.
Muqdisho, Oct 08 ? Hawl-gallo maanta ay si wadajir ah magaalada Muqdisho uga sameeyeen ciidamada dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, ayaa dawladdu ku sheegatay gaarista guulo wax-ku-ool ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin hanashada deegaanno cusub.
Baaxadda hawlgalka oo ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa sida la tilmaamay looga gollahaa ka sifaynta Al-shabaab deegaanno lagu tuhunsanaa oo ka mid ah degmadaasi Kaaraan, kuwaasi oo la sheegay in ay fariisimo ku lahaayeen.
Mas?uuliyiinta dawladda ayaa sheegay hawlgalkaasi maanta in ay kula wareegeen meelo badan oo muhiim ah oo ka mid ah degmada Kaaraan, waxaana goobaha dawladdu la wareegiddooda ay sheegatay ka mid ah isbtaalka Kaysalay.
Dhinaca kale dawladdu isla hawlgalkaasi waxay ku sheegatay in ay ku soo qab-qabatay maxaabiis ka mid ah ururka Al-shabaab kuwaasi oo uu ku jiro nin Al-shabaab u qaabilsanaa qorgaynta dadka, sidaasina waxaa Daljir u sheegay taliyaha ciidanka CID-da Col. C/llaahi Xasan Bariise, mana jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca Al-shabaab.
Hawlgalkaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay maanta Muqdisho ka sameeyeen ayaa ku soo beegmaya xilli dhawr maalmood ka hor qarax is-miidaamin ah lagu weeraray xarun ay ku yaalliin tiro badan oo ka mid ah wasaaradda dawladda taasoo ururka Al-shabaab ay sheegteen.
on aecf PR: Renewable energy businesses in Somalia to get financial and technical assistancecubeyd[email protected]